ဖလမ်းကျေးရွာ ၁၀ ရွာကျော် တီးတိန်မြို့နယ်နှင့် ပူးပေါင်းရန်လိုလား | Home
« မြို့ရံပုံငွေအတွက် ဂန့်ဂေါလေယဉ်ကွင်းကို ရောင်းချမည်
ကျောင်းသုံးထိုင်ခုံ မလုံမလောက်ဖြစ်၊ ကျောင်းသားများ အလှည့်ကျ ကျောင်းတက်နေရ »
ဖလမ်းကျေးရွာ ၁၀ ရွာကျော် တီးတိန်မြို့နယ်နှင့် ပူးပေါင်းရန်လိုလား
May 2, 2012 by khonumthungburmese ၀၆ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၀၊ ချင်းပြည်နယ်အထက်ပိုင်း ဖလမ်းမြို့ နယ် မဏိပူရမြစ်တဖက်ကမ်းတွင် တည်ရှိသည့် ကျေးရွာ ၁၀ ကျော်မှ ရွာသားများက ကျေးရွာများအား တီးတိန်မြို့နယ် အတွင်း ပူးပေါင်းရန် လိုလားလျက်ရှိသည်။
ဖလမ်းမြို.မှ မိုင်းပေါင်း ၃၀-၄၀ ခန်.ကွာဝေးပြီး တီးတိန်မြို.နယ်စပ်ဘက်တွင် ကပ်လျက်ရှိနေကြသည့် ၄င်းကျေးရွာများ သည် မြို.နယ်အာဏာပိုင်များ၏ ဂရုမစိုက် ခြင်း၊ မြို.ပေါ်အစိုးရဌါနဆိုင်ရာများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ လွန်းခြင်းတို့ကြောင့် ၄င်းတို.ကျေးရွာများကို ဖလမ်းမြို.နယ်အဖြစ် မသတ်မှတ် တော့ဘဲ တီးတိန်မြို.နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန်ပြောဆိုလာ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖလမ်း မြို.ခံများ၏ ပြောပြချက်အရသိရသည်။
“ဖလမ်းမြို.ကို သွားဖို. ကျနော်တို.ကျေးရွာပေါင်း ၁၀ ကျော်ကအသုံးပြုနေတဲ့ မဏိပူရ မြစ်ဖြတ် ကူးတဲ့ကြိုး တံတားပျက်စီး တာ နှစ်အတော်ကြာနေပါပြီ၊ အဲဒါကို ပြုပြင်ပေးဖို. သက်ဆိုင်ရာ (မယက)ကိုလည်း အကြိမ် ပေါင်းများစွာတင်ပြပြီးပါပြီ၊ ဒါပေမဲ့ သူတို.က လုံးဝဂရုမစိုက်ဘူး၊ ခုထိလည်း မပြင်ပေးသေးဘူး ဒါကြောင့် ဖလမ်းမြို.နယ်မှာ မနေချင်ကြတော့ဘူး၊ ကျနော်တို.ကျေးရွာ တွေကို တီးတိန်မြို.နယ်အဖြစ်နဲ. တရားဝင် သတ်မှတ်ဖို.ဆန္ဒပြင်းပြလာကြတာဖြစ်တယ်”ဟု Saihmun ရွာသား တဦးကပြော သည်။
တီးတိန်မြို့ နယ်ဘက်တွင် ကပ်လျက်ရှိနေပြီး မဏိပူရမြစ်တဖက်ကမ်းတွင်တည်ရှိ သည့် Khuabual, saih mun, khawdar, bochung, bualmin, belawi, khuang mual, tisen, bualkhua, farkhawm, zawlnu စသည့်ကျေးရွာများမှ ဒေသခံများ သည့် ဖလမ်းမြို.သို.သွားလာရာတွင် မဏိပူရမြစ်ကိုဖြတ်ကူးကြရသည်။
သို.သော်လည်း မဏိပူရမြစ်ဖြတ်ကူးသည့် ကြိုးတံတားသည် ယိုယွင်းပျက်ဆီးနေ ပြီဖြစ်သောကြောင့် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းက ဖလမ်းမြို.သို.သွားလာ ရာတွင် အခက်အခဲများနဲ. ရင်ဆိုင်နေကြရခြင်းဖြစ်သည်။
မဏိပူရမြစ်တဖက်ကမ်းတွင်နေထိုင်ကြသည့် အဆိုပါကျေးရွာများသည် ဖလမ်းမြို. ပေါ်သို.သွားရောက်လို ပါက ဟောင်း နွမ်း နေပြီဖြစ်သော မဏိပူရမြစ်ဖြတ်ကူးသည့် ကြိုးတံတားကို ဖြတ်လျှောက်ကြ ရပါသည်။ ယင်းတံတား ကိုဖြတ်ကူးရန် ကလေး၊ အမျိူးသမီးများအပါအ၀င် ဒေသခံ လူထုက မဖြတ်ကူးရဲကြကြောင်းသိရသည်။
ယင်းကိစ္စနဲ.ပတ်သက်ပြီး ဖလမ်းမြို.ပေါ်ရှိ မယကအဖွဲ.ထံသို. အဆိုပါကြိုးတံတားကို ကောင်းမွန်စွာ ပြုပြင်ပေးရန် အကြိမ် ကြိမ်တောာင်းဆိုတင်ပြနေခဲ့ကြသော်လည်း ယခုထိ တစုံတရာလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း မရှိသေးကြောင်း Saih mun ရွာသား ကဆက်ပြောသည်။
ထို.ကြောင့် ဒေသခံအများစုက တီးတိန်မြို့ ဘက်တွင် ၄င်းတို့အိမ်ထောင်စုအရေး လိုအပ်ချက်များကို ဆောင်ရွက် နေကြ ရသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၄င်းဒေသတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ခရစ်ယာန် ပါစတာတဦးက “ကျနော်က သူတို.ကို ဘာဖြစ်လို.တီးတိန်မြို.နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး နေချင်ကြသလဲလို.မေးတော့ သူတို.ကမြို.နဲ.လည်း အလှမ်း ဝေးတယ်၊ ဆက်သွယ် ရေးလဲ ခက်တယ်လေ၊ အဲဒီလိုအလှမ်းဝေးတော့ ဖလမ်းမြို့နယ် (မယက)ကလဲ ကျန်တော်တို့ ကိုဂရုမစိုက် တာ များတယ်၊ ဒါကြောင့် တီးတိန်မြို့ နယ်မှာနေရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်လို့ ပြောကြတယ် ”ဟု ခိုနူမ်းထုန်သတင်း ဌာနကို ရှင်းပြခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ဒေသခံပြည်သူများက တီးတိန်မြို့ နယ်အတွင်း ပါဝင်ရန် လိုလားသည့် အပေါ် ဖလမ်းမြို့ပေါ်ရှိ ဒေသခံများက မလိုလားဟု ပြောသည်။ မြို့ခံတဦးက “အဲဒီ ဒေသ တ၀ိုက်ကို တီးတိန်းမြို့ နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ချင်တာကိုတော့ ကျန်တော်တို့ ဘယ် နည်းနဲ့ မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ အခုအမြန်ဆုံး ဖလမ်းမြို့ ပေါ် မြို့ မိမြို့ ဖများနဲ့ ညှိနိူင်း မယ်၊ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ရန်ပုံငွေရှာပေးပြီးတော့ တံတားကို လုပ်ပေးဖို.စီစဉ် နေပါ တယ်” ဟုဆိုသည်။